Looney Tunes™ World of Mayhem - Action RPG 14.2.1 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဗားရွင္း 14.2.1 လြန္ခဲ့ေသာ 1 လက
ဂိမ္းမ်ား တကိုယ္ေတာ္ Looney Tunes™ World of Mayhem - Action RPG
Looney Tunes™ World of Mayhem - Action RPG ၏ ေဖာ္ျပခ်က္
ချို့ယွင်းမှုများ Bunny, Daffy Duck, Marvin အဆိုပါဂြိုဟ်နှင့် Mayhem ၏ Looney Tune ™ကမ္ဘာ့ဖလားအတွက်အကြီးမြတ်ဆုံး "Toon ရေးအဖွဲ့" ကိုတည်ဆောက်ရန်အပေါငျးတို့သဂန္ toons Join! တစ်ဦးတက်ကြွ Looney Tune ™ကမ္ဘာ့ဖလားအတွက် wacky တိုက်ပွဲဆင်နွှဲရန် Tweety ငှက်, Taz, လမ်းမကြီး Runner နှင့်ပိုပြီးများကဲ့သို့ကာတွန်းဇာတ်ကောင်စုဆောင်းပါ။
သင်ကစားပွဲကို download လုပ်ပါနှင့်သင်ခန်းစာဖြည့်စွက်သည့်အခါရှားပါးသဘင်လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ Daffy ရယူပါ! 48 နာရီသဘင်လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ Daffy ခံယူဖို့သင်ခန်းစာပြီးပါကပြီးနောက်ခွင့်ပြုပေးပါ။
သင်အကြိုက်ဆုံးဇာတ်ကောင်စုဆောင်းနှင့်၎င်းတို့၏ထူးခြားသောနှင့် Hilary တိုက်ပွဲများစွမ်းရည်တွေ့ရှ။ Porky ဝက်ဖို့လမ်းမကြီး Runner နှင့် Wile အီးဝံပုလှေထဲကနေ Sylvester နှင့် Tweety မှဇာတ်ကောင်များတစ်ဦးချင်းစီထူးခြားသောစွမ်းရည်များနှင့် Hilary တိုက်ခိုက်မှုများရှိသည်။ ဒီမော်ကွန်းအရေးယူ RPG အပေါင်းတို့၌ဂန္ Looney Tune ™ကာတွန်းဇာတ်ကောင်စုဆောင်းပါ။
သင့်ရဲ့အကြိုက်ဆုံး toons နှင့်အတူအဖွဲ့များ Build နှင့်အထင်ကရနောက်ပြောင်မှုများနှင့် gags နှင့်သင်၏ရန်သူများကိုဆင်းယူပါ! ဂန္ကာတွန်းပြိုင်ဆိုင်မှုကိုသုံးပါနှင့်သင် Wile E ကိုဝံပုလှေ vs. Tweety သို့မဟုတ်လမ်းမကြီး Runner vs. Sylvester ကဲ့သို့အထင်ကရရန်သူ, အနိုင်ယူသည့်အခါအပိုဆုကြေးငွေရရှိမည်ဖြစ်သည်။
အလှည့်အခြေစိုက်မဟာဗျူဟာနှင့်ကာတွန်းတိုက်ခိုက်ရေးနှင့်အတူစစ်တိုက်! စာလုံးများကိုသူတို့ရန်သူများအပေါ် slapstick တိုက်ခိုက်မှုတိုက်ဖျက်မည်, ဒါကြောင့်သင်ဧရာပေနှင့်အတူ Daffy ရဲ့ဦးခေါင်းဒါမှမဟုတ်ရှုံးနိမ့်အဲလ်မာဖတ်တခုတခုအပေါ်မှာ ACME လုံခြုံ drop နိုငျပါသညျ!
PvP ပွဲသင်ဆုလာဘ်နှင့်အာဏာ-ups ရဖို့သေတ္တာခိုးယူကြကုန်အံ့,
ကမ္ဘာကြီးကိုအဆောက်အဦ Start နှင့်သင့်အကြိုက်ဆုံးကာတွန်းဇာတ်ကောင်များနှင့်အထင်ကရအဆောက်အနှင့်သင်၏ကိုယ်ပိုင် Looney Tune ™ကမ္ဘာ့ဖလားဖန်တီးပါ။ သင့်ရဲ့ဇာတ်ကောင်ကိုတက်ပါဝါပေးဖို့ကာတွန်းထဲကနေမစ်ရှင်ထွက်သယ်ဆောင်ထို့နောက်သင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေး Looney Tune ပုံဖော်ဖို့အချိန်လေး™သင်အကြိုက်ဆုံး Looney Tune ကနေတည်နေရာများကိုစုဆောင်း™ကမ္ဘာကြီးကို။
mayhem ၏ပညာရှင်ဖြစ်လာမှကာတွန်းဇာတ်ကောင်စုဆောင်းနှင့်စစ်တိုက်! Mayhem ၏ Looney Tune ™ကမ္ဘာ့ဖလားယနေ့ Download!
MAYHEM အင်္ဂါရပ်များ WORLD
Looney Tune ™ ARPG
- တူသော Looney Tune ™ဇာတ်ကောင်စုဆောင်း:
- ချို့ယွင်းမှုများ Bunny, အဲလ်မာဖတ်, Daffy Duck, Porky ဝက်, Yosemite ဆမ်မာဗင်အဆိုပါဂြိုဟ်, ပြီးတော့ပိုပြီး!
- Tweety vs Roadrunner နှင့် Sylvester vs Wile E ကိုဝံပုလှေများကဲ့သို့ကျော်ကြားရန်ငြိုးထားခြင်းထပ်ဖွ!
- အထူးတိုက်ခိုက်မှုအဖြစ်ကာတွန်း gags ကိုသုံးပါ
- အလှည့်အခြေစိုက်မဟာဗျူဟာတိုက်ခိုက်ရေးအတွက် Fight
- အရင်းမြစ်များစုဆောင်းရန်မစ်ရှင်ပေါ်တွင်သင်၏ကာတွန်းအပေါင်းအဘော် Send
- toons ရဲ့အကောင်းဆုံးနှင့်အနှစ်သက်ဆုံးအသင်းဖန်တီးရန်သင့်အဖွဲ့သည်ဆောက်ကျွမ်းကျင်မှုကိုသုံးပါ
- အကျင့်စာရိတ္တ Synergy အပေါ်အခြေခံပြီးမာစတာအဖွဲ့ lineup
- သင့်ပြိုင်ဘက်ဆန့်ကျင်အားသာချက်များနှင့်မဟာဗျူဟာမြောက်ကို select လုပ်ပါကာတွန်းဇာတ်ကောင်
- အထင်ကရရှုခင်းများ Unlock နှင့်ကျော်ကြားသောကာတွန်းတည်နေရာကနေဂန္အဆောက်အဦးများစုဆောင်း
- သင့်ဇာတ်ကောင်တစ် Looney Tune ™ကမ္ဘာကြီး Create
- တာဝန်များကိုဖြည့်စွက်ရန်သင့် toons တာဝန်ပေးဖို့နေဖြင့်သယံဇာတများကိုရယူနိုင်သော
- PvP အတွက် Fight - player ကို RPG ကိုက်ညီ vs ကစားသမားအတွက် toons သင့်ရဲ့အဖွဲ့စမ်းသပ်ရန်!
- PvP သင်သည်သင်၏ပြိုင်ဖက်ကနေအာဏာကို-ups နှင့်ပြည့်စုံသေတ္တာခိုးယူကြကုန်အံ့သို့မဟုတ်သင့်ကိုယ်ပိုင်ခုခံကာကွယ်ကိုက်ညီ
Looney Tunes™ World of Mayhem - Action RPG အတြက္ အသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
Looney Tunes™ World of Mayhem - Action RPG အေပၚ ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈမ်ား
Looney Tunes™ World of Mayhem - Action RPG အေပၚတြင္ ျပန္လည္ စစ္ေဆးမႈ မရွိပါ။ ပထမဆံုး ျပဳလုပ္လိုက္ပါ!
Looney Tunes™ World of Mayhem - Action RPG အား အခ်က္ျပပါ
mr-robot-games စတိုး 6.5k 11.57M
Looney Tunes™ World of Mayhem - Action RPG ႏွင့္ အလားတူေသာ အက္ပ္မ်ားကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ
APK အေၾကာင္း Looney Tunes™ World of Mayhem - Action RPG အခ်က္အလက္
APK ဗားရွင္း 14.2.1
ထုတ်လုပ်သူ AQUPEP Games, LLC
ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု မူဝါဒ http://scopely.com/privacy
လက်မှတ် SHA1: 3A:E1:0F:D2:6B:9C:CE:AB:8D:5C:4F:44:35:0A:5C:B6:7D:49:7B:11
ထုတ်လုပ်သူ (CN): Pepe Development
အဖွဲ့အစည်း (O): Aquiris Game Studio
Looney Tunes™ World of Mayhem - Action RPG APK ကိုေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ